4 × 4 Forklift-shiino
Sidee loo ilaaliyaa nidaamka bareega ee iskudhafka mashiinka la taaban karo?
Waxaa qoray admin on 21-04-09
Tilmaamaha dayactirka ee nidaamka bareega ee iskudhafka mashiinka la taaban karo: Darawal kasta oo iskudhafka isku dhafka isku dhafka ah wuxuu lakulmay xaalada nodding markuu wado. Waxa loogu yeero nuuxnuuxsiga ayaa ah in bareeggu aad u xoogan yahay, taasoo keentay isbadalka lama filaanka ah ee taayirada Jooji, jirka hoostiisa ...
Waa maxay nooca isdifaaca fiicnika shubka ah ee kafiican?
Waxaa jira inbadan oo soosaarayaasha iskudhafka iskudhafka la taaban karo, iyo badeecada noocyadeeda kala duwan oo dhib badan, taas oo u keenta dhibaatooyin dadka isticmaala inay iibsadaan; 1. Si loo fahmo cabirka wax qabad ee iskudhafka mashiinka la taaban karo, tusaale ahaan, waxaan arki karnaa nooca mishiinka aan doorano, imisa ca ...
Dayactirka qodda lixdaas ma sameyn karo!
1. Cadaadiska taayirku aad ayuu u sarreeyaa Marka la isticmaalayo qodista, dayactirka taayiradu aad buu muhiim u yahay. Guud ahaan marka la hadlayo, cadaadiska taayirrada waxaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo cadaadiska caadiga ah ee mashiinka xilliga dayrta iyo jiilaalka marka heer kulku ku habboon yahay. Si kastaba ha noqotee, cadaadiska caadiga ahi maaha ...
Ka waran ifafaalaha "nuuxnuuxsi" ee ku jira dhululubada korantada ee qodista?
Habka cilad-baadhista qanjidhada hawo-haynta ah ee qodista 1. Markay silsiladda korantada ee koombiyoodku ay "kor u kacdo" marka ay kor u qaadayso, xulo silsilad hidde ah oo caadi ah (sida baaldi silsilad) si loogu beddelo marinka saliidda iyo soo-celinta tuubooyinka labada dhulullood. Waqtigaan, ku shaqee buc ...
Maxay tahay in fiiro gaar ah la siiyo marka mishiinka giraangiraha wheel shaqeeyaa?
1. Ka dib marka la bilaabo mashiinka wiishka giraangiraha, wuxuu diyaar u yahay inuu bilaabmo marka cadaadiska bareega uu gaadho cadaadiska nabadgelyada, si loo hubiyo in biriiga la ilaaliyo inta lagu jiro gaariga. Way adag tahay Xaaladda degdegga ah ee biriijka, riix badhanka xaaladda degdegga ah iyo bareegga bareegga (badhanka ayaa kaliya ...
Maxay tahay in gadaal dambeeyaashu ay diiradda saaraan markay wax nadiifinayaan?
Backhoe Loader waxaa badanaa loo isticmaalaa goobaha dhismaha. Warshadeena casriga ee dhismaha, sidoo kale waa waajibkeyga inaan helo qalab dhisme oo qiimo jaban Waxa aan aad u xiiseyneyno waa hagaajinta qalabka gadaal gadaal iyo guddiga gaagaaban ee mustaqbalka la isticmaali doono, iyo sidoo kale adeegsiga dambe ee Dhibaatooyinka gadaal u ah .. .
Maxaan u fiirsanaa marka la isticmaalayo gawaarida forklift?
Arimaha u baahan fiiro gaar ah marka aad isticmaaleyso gawaarida forklift waxaa ka mid ah: 1. Marka la adeegsanayo gawaarida forklift, fiiro gaar ah waa in la siiyaa ku soo celinta batteriga waqtigiisa iyo dayactirka saxda ah ee batteriga. Fiiro gaar ah u yeelo dariiqa markaad buuxinayso batteriga kaydinta Si buuxda ayaa loo soo oogay iyadoon ...
Maxay tahay in fiiro gaar ah loo yeesho 4 Wheel Drive Forklift Truck engine?
4 gaari xamuul ah oo forklift ah ayaa naga caawin kara inaan xallino dhibaatooyin badan oo xagga gaadiidka ah, gaar ahaan qaar xoogaa waaweyn oo sibidh ah, shamiito, iwm. 4 gaari xamuul ah forklift waxaa badanaa loo isticmaalaa dhismaha goobta dhismaha iyo r ...
Sida loo yareeyo isticmaalka tamarta aan loo baahnayn inta lagu jiro hawlgalka qodista qodista
Marka hore, yaree luminta awoodda aan loo baahnayn. 1. Isticmaalka saxda ah iyo ilaalinta tuubbada qiiqa iyo muffarada, oo ay ka mid yihiin ka-saarista coke-ka ee masafka, dayactirka waqtiga ku habboon ee muffarada, looma baahna in horay loo sii rakibo dhuumaha qiiqa, looma baahna midab isu sameysan iyo dhuumaha dhaadheer ee dheer, iwm. 2.Kee ...
Teknolojiyaddu waa wax soo saarka aasaasiga ah, mashiinkan wax lagu qaso ee la taaban karo runti wuu sameeyaa
Xawaaraha injineernimada Shiinaha ayaa caan ku ah adduunka, iyo mashiinnada injineernimada horumarsan ayaa door muhiim ah ka ciyaara. Mashiinka gawaarida ee WIK ayaa si buuxda u badalaya wax soo saarka la taaban karo. Nidaamka wax ku oolka ah ee caqliga badan wuxuu ka dhigayaa wax soo saarka mid sahlan oo fudud. Quudinta, miisaanka iyo isku darka Cirbadda biyaha ayaa b ...
Waa maxay sababta Iskan Loading Mixers la taaban karo caan u tahay
Daahfurka Mashiinada isku dhafka ah ee la taaban karo ayaa furtay qaab cusub oo loo adeegsado shubka mashaariicda yar yar iyo kuwa dhexe, taas oo ah mid dhaqaale oo ku haboon, mashaariic badan oo yar yar iyo kuwa dhexdhexaad ahna ay ku iibsadeen mashruuca. Ka mid ah gawaarida badan ee iskudhafka iswada, gawaarida isku dhafan waa v ...
Sidee ayay shaqaaluhu u nidaamiyaan hawlgallada Isukeenistayaasha La Taaban karo ee Is-Buuxinta ah_Sidee ayaa loo sameeyaa Isku-darka Isku-duwaha Isku-kalsoon ee Isku-dhafan?
1. Ka dib marka aad ka soo dejiso goobta dhismaha, isla markiiba ku shub buunshaha quudinta, sii daa tuubada, kuna sii daa tuubada tuubbada la socota baabuurka isku dhafka ah si looga saaro dhoobada iyo shubka jidhka ku dheggan. Dib Ugu noqoshada saldhiga isku darka, 150—200L oo biyo ah waa inay ahaadaan ...
Qodista Crawler, Is Loading fiicni la taaban karo, Mini Wheel Loader, Baaskiil Wheel Loader, Gawaarida Xamuulka, Lw300kn Gawaarida Xamuulka,